३१ लाख सदस्य बनाउने माओवादी ​लक्ष्य, प्रदेश १ मा कसको भूमिका के ? - Newslaya
३१ लाख सदस्य बनाउने माओवादी ​लक्ष्य, प्रदेश १ मा कसको भूमिका के ?
न्युजलय २५ असोज २०७८, सोमबार ०४:१५ मा प्रकाशित
काठमाडौ । पुस १३, १४ र १५ गतेका लागि तय भएको राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले ३१ लाख मानिसलाई संगठित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै पार्टी नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएर संगठनलाई सशक्त बनाउने निर्णय गरेको छ ।
असोज ६, ११, १२ र १३ गते सम्पन्न माओवादीको स्थायी कमिटी बैठकले केही नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । माओवादीले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुखको पनि जिम्मेवारी दिएको छ भने सुरेन्द्र कार्की ९राम कार्की० उपप्रमुख चयन भएका छन् । उनी प्रवास समन्वय समितिमा समेत इञ्चार्जको भूमिकामा छन् ।
प्रदेश १ का प्रायः ठाउँहरुमा खासै परिवर्तन गरिएको छैन । प्रदेश नम्बर १ को सचिवमा हेमराज भण्डारी चयन भएका छन् । यसअघि नै निर्णय गरिएका प्रदेश १ को इन्चार्जमा सुरेन्द्र कार्की, सहइञ्चार्जमा सावित्रीकुमार काफ्ले, पदम राई, धर्मशीला चापागाईँ, अजम्बर काङवाङ र अध्यक्षमा सुरेन्द्रकुमार राई यथावत् छन् ।
यस्तै जिल्ला समन्वय समितितर्फ पनि माओवादीले ताप्लेजुङमा खेलप्रसाद बुढाथोकी, उदयपुरमा सुरेश राई, पाँचथरमा इन्द्रबहादुर आङ्बो, विराटनगर महानगरपालिकामा विशकुमार मण्डल, इलाममा धीरेन्द्र शर्मा, झापामा धर्मशीला चापागाईँ, मोरङमा गोपीबहादुर अछामी, सुनसरीमा एकचन्द्र बराल इञ्चार्ज तोकिएकोमा उनीहरुलाई कायम राखिएको छ ।
धनकुटामा हेमराज भण्डारी, तेह्रथुममा दुर्गाप्रसाद चापागाईँ, संखुवासभामा राजेन्द्र कार्की, भोजपुरमा सुदन राई किराँती, खोटाङमा समिता कार्की सोलुखुम्बुमा हेमकुमार राई, ओखलढुंगामा बाबुराम गौतम, इञ्चार्ज चयन भएका छन् ।
माओवादीका २२ वटा विभाग छन् । जनवर्गीय तथा सामुदायिक संगठनका इन्चार्ज पनि यसअघि नै चयन भइसकेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रमा अब एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा लागू गरिने भएको छ । यस्तै एक वडामा कम्तीमा तीन वटा टोल समिति, एक टोलमा कम्तीमा ३ सेल र एक सेलमा ३ देखि १५ संगठित सदस्य रहने गरीको संरचना बनाएको छ । एक टोल समिति वरिपरी कम्तीमा १५ जना सदस्य रहेको वाईसीएल र महिला सङ्गठनहरू बनाउनुपर्ने पनि प्रावधान राखिएको छ